वास्तुशास्त्रः घरको उत्तर–दक्षिण दिशामा सिक्काले भरिएको कचौरा राख्दा यस्तो फाइदा ! जानी राखौ « Online Tv Nepal
वास्तुशास्त्रः घरको उत्तर–दक्षिण दिशामा सिक्काले भरिएको कचौरा राख्दा यस्तो फाइदा ! जानी राखौ
Published :6March, 2020 9:29 pm
वास्तुशास्त्रमा बताइएका कुरामाथि ध्यान दिने हो भने घरमा सुख र शान्ति र ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ । वास्तुशास्त्र अनुसार घर सफा गर्दा पानीमा अलिकति नून हाल्नुस् । यसो गर्दा घरमा सकारात्मक ऊर्जा छाउँछ । यस्तो ऊर्जा भएको घरमा कहिल्यै धनको कमी हुँदैन।
घरको उत्तर-दक्षिण दिशामा पैसाको सिक्काले भरिएको कचौरा राख्नुस् । यो घरको नेतृत्वदायी दिशा हो । यहाँ धातुका सिक्काले भरिएको कचौरा राख्दा श्रीवृद्धि हुने विश्वास गरिन्छ । घरमा परिवारको फोटो झुण्ड्याउनका लागि दक्षिण पश्चिम दिशा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।
यस दिशामा फ्यामिली फोटो राख्दा परिवारसँग मिलेर काम हुने, झैझगडा तथा कलह नहुने विश्वास गरिन्छ । घरको पूजाकोठामा अन्य देवताका साथसाथै वास्तुदेवताको तस्वीर पनि राख्नुस् । तस्वीर वा मूर्तिमा नियमित पूजा गर्नुस् । यसो गर्दा वास्तुदोष हटेर जान्छ। घरको छतमा राखिने पानी ट्याङ्की दक्षिणपश्चिम दिशामा राख्नु ठीक हुन्छ ।
अन्य दिशामा राख्नु वास्तुशास्त्रअनुसार अशुभ हुन्छ । अन्य दिशामा ट्यांकी राख्नुभएको छ भने दोष निवारणका लागि रातो धागोमा क्रिस्टल बाँधेर ट्यांकीमा झुण्ड्याउनुपर्छ। भान्सामा आगो र पानी नजिकै राख्नुहोला । यी दुई परस्पर विरोधी चीज हुन् । यिनलाई सँगै राख्दा काममा असफलता हुने वास्तु शास्त्रले बताउँछ ।